Ukuvalelwa kwee-AirPods kwiwebhusayithi yeApple | Iindaba zeGajethi
Ukuvala ii-AirPods kwiwebhusayithi ye-Apple
Izixhobo ngokucacileyo ziyimakethi ebalulekileyo kwilizwe le-Apple kwaye zibonisa isixa esikhulu esisifumana kwiwebhusayithi yenkampani yeCupertino. Kuyinyani ukuba amaxabiso ezinto zokugquma, imitya kunye nalo lonke eli xabiso lezincedisi kwiimeko ezininzi zibiza kakhulu, kodwa kule meko amagqabi athi Bathengisile i-AirPods Pro Zixinene ngokujonga uphawu kwaye ziyilelwe ngokukodwa ezi ntloko zeApple.
Iimodeli ezimbini ezineendlela ezahlukeneyo kodwa inenjongo enye
Injongo yezigqubuthelo kukugubungela iimfuno ezahlukeneyo zabasebenzisi kwaye kuzo zonke iimeko zikhusele ibhokisi yokutshaja kunye neefowuni ngokwazo kumaqhuma, imikrwelo nkqu kwimeko enye yazo ingangenwa ngamanzi. Ewe kunjalo Ushicilelo olukhethekileyo lweCatalyst Sesinye seqweqwe elithengiswa nguApple kwiwebhusayithi yalo ukusukela ngoku kwaye Inexabiso le-29,95 euro, Ityala le-silicone elinesiqinisekiso se-IP67. Isikhuselo sokuchukumisa ukuthamba esingathinteliyo kunye nethontsi esingabandakanyi i-carabiner yokudibanisa iluphu yebhulukhwe okanye ibhegi.
Kwelinye icala sinemodeli Yenza iWoolenex, isiciko esahluke kancinane kunesidlulileyo esisinika umphako oluxubileyo wangaphandle ngokuxhathisa okukhulu kukungxala, ukukrwela kunye nokukrwela. Ngaphakathi kweli tyala sifumana iBayer Makrolon polycarbonate iqokobhe ngenaliti ebunjiweyo ubunzima obuphantsi kunye nokumelana okukhulu. Kule meko ixabiso nalo 29,95 euro.
Kucacile ukuba singafumana izigqubuthelo kwenye indawo kwaye mhlawumbi ngexabiso elingcono, ingxaki iyinto eqhelekileyo xa sigxila kumgangatho wezigubungelo. Ngokuqinisekileyo oku kunokuba sisipho esihle kakhulu sesipho kwezi holide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Ukuvala ii-AirPods kwiwebhusayithi ye-Apple
I-Kygo E7 / i-1000 ye-Kygo's TWS yazo zonke iintlobo zabasebenzisi [Uphengululo]